Archive du 20170804
Loza teny Ankazobe Olona maro no hidoboka am-ponja
Mandeha ny fanadihadiana momba ny antony nahatonga marina ny loza ka nampivadika ilay fiarabe teny Ankazobe ka nahafatesana olona 20 mahery, araka ny resaka nifanaovana tamin’ny kolonely Ravoavy Zafisambatra, lehiben’ny Emmo reg Analamanga omaly.
Fikambanan’ny Zanaky ny Faritany Toliara Mikorontana ambony ambany
Tsy mitsahatra mitombo ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ireo mpikambana FIZAFATO amin’izao ankatoky ny hanatanterahana ny fifidianana voalaza fa ho tanterahina amin’ny alahady 6 aogositra izao etsy amin’ny ANS Ampefiloha.
Kongresin’ny TIM tany Manakara Fahombiazana tanteraka
Fahombiazana tanteraka ny Kongresim-paritry ny Antoko Tiako I Madagasikara ho an’ny faritra Atsimo Atsinana sy Vatovavy Fitovinany notanterahina tany Manakara, tao amin’ny hotely Mangneva, omaly.
Raharaha Mamy Rakotoarivelo Misy zavatra hafenina
Tsy mbola tonga eny amin’ny polisy hatramin’izao ny valin’ny fizahana natao ny razana na ny “Autopsie” momba ny raharaha nahafaty an’i Mamy Rakotoarivelo.
Nofo mangatsiakan’I Tsiandopy Jacky Hoentina any Vohémar anio
Anio zoma no hentina any Antsiranana ny nofo mangatsiakan’i Tsiandopy Jacky Mahaly, izay nodimandry teo amin’ny faha 65 taona, vokatry ny famonoana azy tao an-tranony teny Ivato ny alin’ny lahady 30 jolay teo
STAR Tour Mahajanga Entina hamalifaliana ny mpanao vakansy
Anisan’ny tanàna iray tena be mpiala sasatra tokoa rehefa fotoam-pialan-tsasatra lehibe tahaka izao ny ao an-drenivohitr’i Mahajanga.
ORANGE Solidarité Madagascar 7 taona nanaovana asa sosialy
Efa fito taona ny nanaovana asa soa teto amintsika ny fikambanana « Orange Solidarité Madagascar » ankehitriny, sampana iray eo anivon’ny orinasam-pifandraisana Orange.
Taorian’ny faty olona tamin’ny fanjanahatany, dia tamin’ity fitondrana Rajaonarimampianina ity no nisian’ny aina Malagasy maty sy ripaka be indrindra.
Fanabeazana maha olom-pirenena Hatao taranja manokana
Laharam-pahamehana ao anatin'ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana (PSE) ny fametrahana fanabeazana mangarahara ao anaty tontolo mahafinaritra mikendry sy mikolokolo ny ankizy ho tonga olom-pirenena vanona
Soavinandriana Itasy Fianakaviana 300 mahery no ahiana ho very fivelomana
Hitrangana ady tany goavana any Soavinandriana, Faritra Itasy amin’izao fotoana izao. Fianakaviana 300 mahery mivelona amina tany 569 ha mantsy no ahiana ho very asa fivelomana.
Antoha Ambilobe Nahitana fatin-dehilahy iray efa tapa-doha
Taorian’ilay zazavavy kely vao dimy taona monja nisy nanolana dia namono tao Ambilobe dia fatin-dehilahy iray indray no hita tao amin’ny Fokontanin’Antsoha,